स्वास्थ्य/जीबन शैली Archives - Enepal Serofero
भगांकुर चलाउनु वा यसको घर्षण नै महिला चरमसुखमा पुग्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण यौन क्रियाकलाप हो । यो यस्तै ९० प्रतिशत महिलामा यौन संवेदनशीलताको केन्द्र हो । आफूलाई सजिलो लाग्ने वा मन पर्ने कुराले यसलाई चलाउन सकिन्छ । चलाउने वा घर्षण गर्नेबाहेक दबाब दिने, बिस्तारै हल्लाउने वा जोडले हल्लाउने वा यसलाई कुनै वस्तुमाथि थिच्ने जस्ता अनेक उपाय गर्न सकिन्छ । हाम्रो समाजका धेरैजसो मानिसले महिलाहरू हस्तमैथुन गर्दैनन् भन्ने मान्छन्, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । महिलाहरूले पनि हस्तमैथुन गर्छन् । एक अध्ययनअनुसार ८२ प्रतिशत महिलाले हस्तमैथुन गरेको अनुभव भएको बताएका छन् । महिलाले कसरी हस्तमैथुन गर्छन् ? योनिलाई नै महिलाको प्रमुख यौनअङ्ग मानिन्छ । महिलाहरूमा योनिबाहेक अन्य विभिन्न अङ्ग पनि यौनका दृष्टिकोणले संवेदनशील हुन्छन् । जस्तै कि भगक्षेत्र, ठूलो तथा सानो भगोष्ठ, भगांकुर, स्तन । त्यसबाहेक मुख तथा
काठमाडौं । धेरै मानिसको मुखमा साना–साना बिबिरा, फोका–फोकी, खटिरा आइरहने हुन्छ । कसैलाई आएरपनि सताएको छ । निको हुनपनि निक्कै समय लाग्छ । मुखभित्र, जिब्रो, गिजा, ओठ लगायत मुखको कुना–कानी र कहिलेकाहीँ गालाको छेउसम्म पनि घाउ भएको छ ? यस्ता घाउ खटिराको समस्या बढेर जटिल समस्या पनि आउन सक्छ । घाऊ ठूलो र गहिरो भएमा खान बोल्नै नहुने किसिमको पनि हुन सक्छ । यसले गर्दा लगातार दुख्ने, पोल्ने, ज्वरो आउने, घाँटीको ग्रन्थि सुन्निने, दुख्ने समस्या पनि निम्तिन सक्छ। त्यसैले मुखको घाउ, खटिराबाट छुटकारा पाउन निम्न उपाय अपनाउनुहोस । मनतातो पानीमा फिटकिरी मिसाएर दिनमा ३ पटक कुल्ला गर्ने पानी प्रशस्त पिउने तर बढी चिसो वा तातो नपिउने हरियो सागपात तथा फलफूलहरु मजाले चपाएर खाने मह घाउमा लपक्क लगाउने बढी चिल्लो नखाने हल्का उम्रेको गेडागुडी बिहान र बिहान खाने पानीमा तुलसीको पातको रस राखेर कुल्ला गर्ने बदाम
म २२ वर्षीय अविवाहित पुरुष हुँ । सम्भोगको आनन्द पनि लिइसकेको छु । अविवाहित भएका कारण चाहेका बेला यौन पार्टनर पाउन सम्भव हुने कुरै भएन । यौन चाहना हस्तमैथुन गरेर पूरा गर्छु । हस्तमैथुन गर्दा मैले यौनसम्पर्क राखेका पार्टनरका यौनांग सम्झन्छु र पत्रपत्रिकामा छापिने ग्ल्यामरस तस्बिर तथा कहिलेकाहीँ ब्लू फिल्म पनि हेर्छु । तर, मलाई अहिले आफ्नो हस्तमैथुन गर्ने बानीदेखि डर लाग्न थालेको छ । कतै मैले गल्ती त गरेको छैन ? विवाहपछि पनि हस्तमैथुनमै बढी लागुँला कि भन्ने पिर छ । दुब्लो पनि छु । हस्तमैथुन गर्नु कतिसम्म राम्रो वा नराम्रो के हो ? सी हस्तमैथुन भन्ने शब्दको अर्थ हातले गरिने मैथुन भन्ने बुझिए पनि त्यसको भावार्थ व्यापक छ । आफ्नै वा आफ्नो यौनसाथीको यौनांगलाई चरम सुखप्राप्तिको हदसम्म हात वा विशेष पद्धति अथवा उपकरणका सहायताबाट उत्तेजित पार्ने प्रक्रियालाई हस्तमैथुन भनिन्छ । आत्मरतिको यो सबैभन्दा
तपाइँ रातमा सुत्दा लुगा फुकाल्ने गर्नुहुन्छ की हुन्न ? सायद बाहिरी कपडा फुकालेपनि भित्री लुगा चाहीँ फुकाल्नुहुन्न होला । अझ जाडो याममा त बाहिरी लुगा समेत फुकाल्न धौ धौ हुन्छ होला । बाहिरी लुगा समेत नफुकालीकन सुत्दाखेरी सुत्न अप्ठेरो हुने र निद्रा नपर्ने भएकाले भित्री लुगा वा नाइट डेस लगाएर सुत्ने चलन हुन्छ । तर विज्ञहरुले भने सुत्दाखेरी भित्री वस्त्र समेत खोलेर निर्वस्त्र सुत्ने गरेमा त्यो स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुने बताउँछन् । विज्ञहरुका अनुसार निर्वस्त्र भएर सुत्नाले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा धेरै फाइदा पुग्छ । निर्वस्त्र सुताई व्यक्तिको शारीरिक मात्र नभएर मानसिक स्वास्थ्यका लागि समेत उपयोगी हुने बताइन्छ । विज्ञहरुका अनुसार महिलामा यौन रोगको जोखिम कम गर्न निर्वस्त्र सुताइ निकै फलदायी हुन्छ । खासगरी गुप्तांगमा हुने विभिन्न खालका संक्रमणको खतरा कम गर्न र गुप्तांग स्वस्थ राख्नका ल
ब्रिटेनमा क्याम्ब्रिजका वैज्ञानिकले क्यान्सरको एक भर्चुअल रियालिटी (भीआर) थ्रीडी मोडल बनाएका छन् जसले यो रोगको परीक्षण र उपचारलाई थप उत्कृष्ट बनाउनेछ । तर यो नयाँ प्रविधीमा के विशेष छ ? वास्तवमा यो प्रविधीमार्फत ट्युमरको नमुनालाई सुक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान गर्न सकिनेछ । यसमार्फत क्यान्सरको कोसिकालाई हरेक तरिकाले परीक्षण गर्न सकिने र त्यसको म्यापिङ गर्न सकिने भएकाले यो प्रविधि यसकारण पनि फाइदाजनक साबित हुनेछ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यसको मद्दतले क्यान्सरको जटिलतालाई थप उत्कृष्ट तरिकाले बुझ्न सहयोग हुनेछ । क्यान्सरको जटिलता बुझेपछि यससँग जोडिएका उपचार पनि खोजी गर्न सकिनेछ । यो प्रोजेक्ट एक अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको हिस्सा हो । यसलाई कसरी तयार गरियो ? – अनुसन्धानकर्ताले यो प्रविधि विकासका लागि स्तन क्यान्सरको एक मिलिमिटर टुक्रा लिए । यसमा लगभग एक लाख कोसिका थिए । – यसलाई
एजेन्सी । धेरै मानिसहरुको यौन व्यवहार फरक फरक हुन्छ । यौन व्यवहारलाई फरक देखाउनुमा राशिको पनि केही भूमिका रहन्छ। राशिअनुसार कस्को यौन व्यवहार कस्तो भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सकिन्छ। यो कुरा बास्तुशास्त्रमा उल्लेख छ। बास्तुशास्त्रका अनुसार थाहा पाउनुहोस् कुन राशि भएका व्यक्तिको यौन व्यवहार कस्तो : मेष राशी मेष राशिका मान्छे छिट्टै आवेशमा आउँछन मेष राशिका मानिसमा कामुकता अत्याधिक हुन्छ । तर लामो समयसम्म यौन सम्बन्ध राखिरहन भने मन पराउँदैनन् । यो राशिका मानिसहरु कम समयमा धेरै यौनिक आनन्द लिनेमा विश्वास गर्छन् । यौन सम्बन्ध राख्ने वेलामा यिनीहरु आतुर हुन्छन्। वृष राशी वृष राशिलाई चुम्बन मन पर्छ । वृष राशिका ब्यक्ति धैर्यशाली हुन्छन् । यिनीहरु आवेशमा आउँदैनन् । चुम्बन यिनीहरुलाई निक्कै मन पर्छ । यिनीहरुले यौन सम्बन्ध लामो बनाउन चाहन्छन् र एक अर्कालाई माया गर्नु पर्ने चाहन्छन् । यिनीहरुला
जानुहोस्,पाइल्स रोगलाई एक महिनामै चट पार्ने अचुक घरेलु औषधी र खाने तरिका बारे
पाइल्स रोकथाममा पनि मुलाभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन । मुलाको नियमित र सही प्रयोगबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या केही महिनामै समाधान हुने गर्दछ । यसको सबैभन्दा ठुलो फाइदा यो हो कि मुलाको नियमित सेवनबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या बढ्दा पनि बढ्दैन । पाइल्स एउटा यस्तो रोग हो, जसमा शरीरका विशेष हिस्सामा हरेक समय पीडा र जलन महशुस हुने गर्दछ । पाइल्सका रोगीका साथ सबैभन्दा ठुलो समस्या यस विषयमा डाक्टरलाई बताउनु हो । तर, यो गलत हो । डाक्टरसँग सल्लाह लिएर यसको उपचार गर्नु आवश्यक छ। औषधिका साथसाथ घरेलु उपायबाट पनि केही दिनमा तपाई यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्नु हुन्छ । पाइल्सका रोगीहरुलाई सामान्यतः मुला खान सल्लाह दिने गरिन्छ । यसको सबैभन्दा ठुलो कारण हो, मुलामा डाइट्री फाइबर्स पाइने गर्दछ । यसले स्टुललाई मुलायम गर्न सहयोग गर्दछ । यसबाट पाचन प्रक्रियापनि राम्रो हुन्छ । मुलामा कयौ यस्ता तत्व पाइन्छ, जुन पा
मानिसको सही आहार बिहार नभएर धेरैजसो रोगी भएका छन् । खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर रोगी छ हिजो आज। अल्छी स्वभाव विकसीत हुनु अत्याधुनिक जीवनशैली, कम ब्यायाम, मीसावट युक्त अन्न, बिशादीपूर्ण तरकारी, जिब्रोले स्वाद माने अत्याधिक भोजन जस्ता स्वास्थ्य प्रतिकुल कृयाकलापले मानिस रोग बाट ग्रसित छ। मसालेदार, तारेभुटेको, चप्प खोज्ने हाम्रो स्वाद जिब्रोनै हाम्रो परम शत्रु बन्न पुगेको छ। नआतिनुहोस् यहाँ हामीले पाएको फाईदा यहाँहरु समक्ष् बाँड्दै छौँ। जुवानो र बिरे नुन त हामी सबैको भान्छामा हुने चिज हो। हो यही हो यो रोग को औषधी । जुवानो सुत्केरीलाई मात्र खुवाउने चिज होइन रहेछ। यो त पाचक रहेछ, त्यही भएर त्यो सुत्केरी अवस्थाको अत्यधिक चिल्लो पचाउने काम गर्दो रहेछ यसले।औषधी बनाउने बिधी यस्तो छ एकातिर बिरे नुनलाई धुलो हुने गरी पिसौं। ज्वानो ५ चम्चा जत्ती भुटौं र त्यो पनि पिसौं। ५ चम्चा ज्वानो मा करीब १
मह एन्टी बायोटिक र एन्टी ब्याक्टेरियल हुन्छ भने लसुनमा एलिसिन र फाइबरजस्ता फाइदाजनक न्यूट्रियन्ट्स हुने गर्दछ । यी दुबै मिसाएर खाँदा तपाईंको तौल घटाउनुका साथै विभिन्न रोगबाट छुटकारा दिनेछ । दुबै मिसाएर खानुका १० फाइदाः तौल घट्नुः शरिर र लसुनको मिश्रणले शरिरको बोसोलाई कम गर्दछ । यसले तौल घटाउन सहयोग गर्दछ । मुटुको समस्याः यसले कोलेस्ट्रोल कम हुन्छ र रक्त संचारलाई सन्तुलनमा राख्दछ । बलियो दाँतः यसमा पाइने फस्फरसले दाँत बलियो बनाउँछ । यसले गमको समस्याबाट पनि जोगाउँछ । क्यान्सरः लसुन र महमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले क्यान्सर हुनबाट जोगाउन सहयोग गर्दछ । संक्रमणः यसमा एन्टिब्याक्टेरियल गुण हुन्छ । त्यसकारण फंगल इन्फेक्सन हटाउन यो फाइदाजनक हुन्छ । रुघा खोकीः यो खाँदा शरिरमा गर्मी बढ्छ । त्यसकारण चिसो महिनामा रुघा खोकीबाट टाढा राख्छ । प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्दछः
मगर्नी भाउजूको कथा (14,111)